I-WordPress ne-MySQL: Lithini I-Word Lakho? | Martech Zone
Kube nokukhulunywa okuthile kumabhulogi mayelana nosayizi omaphakathi wokuthunyelwe kwe-WordPress. Kukhanyisiwe okunye ukuthi ama-Search Engines azolinganisa umthelela wokuqala x inani lezinhlamvu, lapho u-x okwamanje engaziwa. Ngenxa yalokho, noma yini ngemuva kwalokho kumane nje kuwukuchitha amagama.
Isithombe kusuka I-Wordle!
Ngikhathazekile kakhulu ngokuthunyelwe kwami ​​kubhulogi ngakho-ke ngizokwenza okunye ukuhlaziywa futhi ngibone ukuthi ukuthandwa kokuthunyelwe kusuka emiphumeleni yosesho akunakho ukuxhumana igama lokubala. Ngeke ngibe nesayensi kakhulu, kepha ngifuna ukubheka ngokujulile.
Ngingabuza kanjani i-WordPress ye-Word Count?
I-MySQL ayinayo umsebenzi owakhelwe ngaphakathi wokubala amagama we-MySQL, kepha njengayo yonke eminye imibuzo engaphenduliwe, omunye umuntu ohlakaniphile ku-blogosphere usevele uphendule ukuthi ungayisebenzisa kanjani i-MySQL ukuthola i-Word Count.
Nawu umbuzo wombhali wegama eliguqulwe ku-database ye-WordPress:
KHETHA ʻID`, `post_date`,` post_type`,
I-SUM (LENGTH (`post_content`) - LENGTH (REPLACE (` post_content`, '', '')) + 1) NJENGOBA 'Wordcount'
KUSUKA `kumikhawulo wp_`
IQEMBU NGU- `ID`
ODA NGOKUTHI `post_date` DESC
I-LIMIT 0, 100
Okwamanje angibhaliseli 'kusayizi weposi ophelele' ngoba lokho okunikeza isisindo ngenjini yokusesha akuyona nje isibalo samagama, kepha inani lezixhumanisi zalokho okuqukethwe. Uma uneposi lamagama elingu-2,000 XNUMX eliheha ukunakwa kwezixhumanisi eziningi, khona-ke usayizi ofanele wokuthunyelwe kwakho kwakungamazwi angama-2,000.
Tags: mysqlinani lamagamai-sqligama lokubalaWordPressamagama
I-Google Adsense Manje Yenza Imali Ngokuphakelayo Kwami
Aug 27, 2008 ngo-2: 21 PM
Ngenxa yalokho, noma yini ngemuva kwalokho kumane nje kuwukuchitha amagama.
Yebo, inqobo nje uma ubhalela i-Google, hhayi abafundi bakho… 😉
Aug 28, 2008 ku-12: 26 AM
Kukhona i-plugin ebizwa nge- "Blog Metrics" ekutshela inani elijwayelekile lamagama kokuthunyelwe kwakho kwebhulogi njll. Kungani ungazami lokho?
Sep 11, 2011 ku-5: 54 AM
Ngibhala ngize ngithole iphuzu lami. Ngicabanga ukuthi kuyisiphukuphuku ukuthi abantu abathenga okuqukethwe basongwe kakhulu ngokubalwa kwamagama.
Sep 11, 2011 ngo-6: 28 PM
UCasey - Ngivumelana nawe ngokuphelele. Ngicabanga ukuthi kunamathuba okusebenzisa izithombe namaphoyinti ezinhlamvu ukuheha abantu ukuthi bafunde okuqukethwe, kepha ngibhala ngize ngicabange ukuthi iphuzu lenziwe… futhi angizami ukwenza okungaphezulu noma okuncane.